IGitHub vs GitLab: izinzuzo nokungahambi kahle kwalezi zingxenyekazi | Kusuka kuLinux
IGitHub vs GitLab: izinzuzo nokungahambi kahle kwalezi zingxenyekazi
Isaka | | Ukuhlela
Yize bobabili banokufana, ngisho nasegameni eliqala ngeGit ngoba zombili zisuselwa kuthuluzi lokulawula inguqulo elidumile elibhalwe nguLinus Torvalds, akukho okunye noma okunye akufani ncamashi. Ngakho-ke, owinile wempi yeGitHub vs GitLab akacaci kangako, banokuhluka okuthile okubenza babe nezinzuzo nezinkinga zabo kubasebenzisi nonjiniyela abavame ukuzisebenzisa.
Ngakolunye uhlangothi, abanye onjiniyela basanda kuthuthela eGitLab, nemiphumela yayo emihle nemibi manje ozokwazi ngayo. Isizathu salo mcimbi ukuthengwa kwepulatifomu yeGitHub ngabakwaMicrosoft, futhi ukungabaza okwenziwe yilokhu. Kepha uma ngikhuluma iqiniso, ipulatifomu iyaqhubeka nokusebenza ngokujwayelekile okwamanje ...
1 Yini iGit?
2 Yini iGitHub?
3 Yini iGitLab?
4 IGitHub vs iGitLab
4.1 Umehluko weGitHub vs GitLab
4.2 Izinzuzo nezinkinga zeGitLab
4.3 Izinzuzo nezinkinga zeGitHub
I-Git iyisoftware yokulawula inguqulo eyenzelwe iLinus Torvalds ye-Linux kernel, njengoba ezinye izinhlelo ezikhona ezifanayo zingamkholwanga. Yize yenzelwe ngqo iphrojekthi yeLinux, manje isinwetshelwe kwamanye amaphrojekthi amaningi wemithombo evulekile yezinzuzo zayo.
Ekuqaleni, lalibhalwe nge ukusebenza kahle, ukuthembeka, nokuhambisana yamaphrojekthi anenombolo enkulu yamafayela ekhodi yomthombo.
Ngokuqondene nokuthi yini isoftware de ukulawulwa kwenguqulo, njengoba kunjalo nge-VCS, i-Subversion, i-CVS, phakathi kokunye, kumane kuyisoftware yokuphatha ushintsho olwenziwa kuzakhi zekhodi yomthombo noma ukumiswa kwayo. Ngaleyo ndlela, iqembu labathuthukisi abazimele abasebenza kulo bangaba nokulawula okungcono futhi babengeke banyathele umsebenzi noma benze izinkinga ngenkathi besebenzisana nale misebenzi ...
GitHub iyipulatifomu yentuthuko ebambisanayo, ebizwa nangokuthi ukwakhiwa Lokho wukuthi, ipulatifomu egxile ekubambisaneni phakathi kwabathuthukisi ekusatshalalisweni nasekusekelweni kwesoftware yabo (yize kancane kancane isetshenziselwe amanye amaphrojekthi angaphezu kwesoftware).
Njengoba igama layo liphakamisa, lihlala ku- Uhlelo lokulawula inguqulo yeGit. Ngakho-ke, kuyenzeka ukuthi usebenze kukhodi yomthombo wezinhlelo bese wenza intuthuko ehlelekile. Futhi, le nkundla ibhalwe kuRuby on Rails.
Inenombolo enkulu yamaphrojekthi womthombo ovulekile agcinwe kungxenyekazi yayo futhi ifinyeleleka esidlangalaleni. Linjalo inani lalo lelo IMicrosoft ikhethe ukuthenga le nkundla ku-2018, enikela ngesamba esingengaphansi kwamadola ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-7500.
Ngaphandle kokungabaza ngalokhu kuthengwa, ipulatifomu yaqhubeka nokusebenza njengokujwayelekile, futhi iyaqhubeka nokuba njalo enye esetshenziswe kakhulu. Igcina amaphrojekthi abaluleke njenge-Linux kernel uqobo ...
I-GitLab kungenye indlela eya kwi-GitHub, enye indawo yokwakha enensiza yewebhu nohlelo lokulawula inguqulo nayo isuselwa kwi-Git. Vele kwaklanyelwe ukusingathwa kwamaphrojekthi womthombo ovulekile nokwenza impilo ibe lula konjiniyela, kepha kukhona umehluko othile kowedlule.
Le webhusayithi, ngaphezu kwe indawo yokugcina izinto nokulawulwa kwenguqulo, futhi inikela ngokubamba ama-wikis, nohlelo lokulandela umkhondo lwe-bug. I-suite ephelele yokwakha nokuphatha amaphrojekthi azo zonke izinhlobo, ngoba, njengeGitHub, amaphrojekthi ahamba ngaphezu kwekhodi yomthombo ayabanjwa njengamanje.
Kwabhalwa ngabathuthukisi base-Ukraine, uDmitry Zaporozhets noValery Sizov, besebenzisa ulimi lohlelo lukaRuby nezinye izingxenye zeGo. Kamuva ukwakhiwa kwayo kwathuthukiswa ngeGo, Vue.js, kanye I-Ruby ku-Rails, njengasendabeni yeGitHub.
Yize waziwa kahle futhi uyindlela ehle kakhulu yeGitHub, ayinayo amaphrojekthi amaningi. Lokho akusho ukuthi inani lekhodi elibanjwe likhulu kakhulu, nezinhlangano ezithembele kulo. kusuka kokuthandwa yi-CERN, NASA, IBM, Sony, Njll
IGitHub vs iGitLab
Ngokwami, bengizokutshela ukuthi akekho onqobayo ocacile ku- Impi yeGitHub vs GitLab. Akulula kangako ukukhetha ipulatifomu ephakeme kakhulu kunenye, empeleni, ngayinye inamandla nobuthakathaka bayo. Futhi yonke into izoncika kulokho okufunayo ngampela ukuze ukhethe okukodwa noma okunye.
Umehluko weGitHub vs GitLab
Ngaphandle kwakho konke ukufana, esinye sezihluthulelo lapho uthatha isinqumo ngokuqhathanisa kweGitHub vs GitLab kungaba umehluko phakathi kwakho kokubili:
Amaleveli okufakazela ubuqiniso: IGitLab ingasetha futhi iguqule izimvume kubahlanganyeli abahlukahlukene ngokwendima yabo. Endabeni yeGitHub, unganquma ukuthi ngubani ofunde futhi abhale amalungelo okugcina, kepha kukhawulelwe kakhulu maqondana nalokhu.
Indawo yokuhlala: Yize womabili amapulatifomu akuvumela ukusingatha okuqukethwe kwamaphrojekthi kuzingxenyekazi uqobo, esimweni seGitLab futhi kungakuvumela ukuthi uzenzele ama-repos akho, okungaba inzuzo kwezinye izimo. IGitHub ingeze leso sici futhi, kepha kuphela ngezinhlelo ezithile ezikhokhelwayo.
Ngenisa futhi uthumele ngaphandle: I-GitLab iqukethe imininingwane eningiliziwe yokuthi ungenisa kanjani amaphrojekthi ukuze uwahambise asuke kwelinye ipulatifomu aye kwelinye, njengeGitHub, iBitbucket, noma uwalethe eGitLab. Futhi, uma kukhulunywa ngokuthumela kwamanye amazwe, iGitLab inikeza umsebenzi oqinile kakhulu. Endabeni yeGitHub, imibhalo eningiliziwe ayihlinzekiwe, noma ngabe iGitHub Importer ingasetshenziswa njengethuluzi, noma ingavimbela kakhulu uma kukhulunywa ngokuthumela kwamanye amazwe.
Umphakathi- Bobabili banomphakathi omuhle ngemuva kwabo, yize iGitHub ibonakala iyinqobile le mpi ngokuthandwa. Okwamanje ihlanganisa ndawonye izigidi zabathuthukisi. Ngakho-ke, kuzoba lula ukuthola usizo kulokhu.
Izinhlobo zebhizinisi: Bobabili bayazinikeza uma ukhokha imali, ngakho-ke ungacabanga ukuthi ukuqhathanisa kweGitHub vs GitLab akunangqondo kuleli phuzu, kepha iqiniso ukuthi iGitLab inikezela ngezinto ezithakazelisa kakhulu, futhi ithandwa kakhulu emaqenjini entuthuko amakhulu kakhulu.
Ngokufingqa, umehluko IGitHub vs GitLab ifingqe ukuthi unabo kuleli thebula:
Uhlelo lwamahhala Amakhosombe womphakathi nawangasese angenamkhawulo Kumahhala kuphela ezinqolobaneni zomphakathi
Izinhlelo ezikhokhelwayo Kusuka ku- $ 19 ngomsebenzisi ngonyaka ngePrimiyamu Plan. Noma u- $ 99 ngomsebenzisi ngamunye ngonyaka we-Ultimate. Kuqala ku- $ 4 ngomsebenzisi nonyaka weThimba, $ 21 nge-Enterprise, noma ngaphezulu kwe-One.
Imisebenzi yokubuyekeza ikhodi Yebo Yebo
Wiki Yebo Yebo
Ukulandelela izimbungulu nezinkinga Yebo Yebo
Igatsha elizimele Yebo Yebo
Yakha uhlelo Yebo yebo (ngensizakalo yomuntu wesithathu)
Ngenisa amaphrojekthi Yebo Cha
Thumela amaphrojekthi Yebo Cha
Ukulandelwa kwesikhathi Yebo Cha
Ukubamba iwebhu Yebo Yebo
Ukuzibamba Yebo yebo (ngecebo lebhizinisi)
Ukubaluleka Amaphrojekthi we-546.000+ Amaphrojekthi we-69.000.000+
Izinzuzo nezinkinga zeGitLab
Lapho nje umehluko nokufana phakathi kweGitHub vs GitLab sekwazile, ubuhle nobubi balezi zingxenyekazi bangakusiza uthathe isinqumo.
Uhlelo lwamahhala ngaphandle kwemikhawulo, noma lunezinhlelo zokukhokha.
Kuyilayisense yomthombo ovulekile.
Ivumela ukusingathwa ngokwakho kunoma yiluphi uhlelo.
Ihlanganiswe kahle kakhulu neGit.
Ukusebenzisana kwayo kungahle kuhamba kancane kunomncintiswano.
Kunezinkinga ezithile ezivamile ezinqolobaneni.
Izinzuzo nezinkinga zeGitHub
Ngakolunye uhlangothi, iGitHub nayo ine- okuhle nokubi, okuphakathi kwakho okulandelayo:
Insiza yamahhala, noma ngabe nayo inezinsizakalo ezikhokhelwayo.
Ukusesha okusheshayo kakhulu kusakhiwo se-repos.
Umphakathi omkhulu futhi kulula ukuthola usizo.
Inikeza amathuluzi asebenzisanayo wokubambisana nokuhlanganiswa okuhle neGit.
Kulula ukuhlanganisa namanye amasevisi wesithathu.
Isebenza futhi ne-TFS, HG ne-SVN.
Inokulinganiselwa kwesikhala, ngoba awukwazi ukweqa u-100MB kufayela elilodwa, ngenkathi amakhosombe enqunyelwe ku-1GB kunguqulo yamahhala.
Njengoba ubona, akekho onqobayo ocacile. Ukukhetha akulula futhi, njengoba ngishilo, kufanele ubheke ngokucophelela izinzuzo, ububi kanye nokwehluka ngakunye ukuze ukwazi ukubona ukuthi iziphi ezifanelana nezidingo zakho.
Ngokwami ​​bengizokutshela ukuthi uma ufuna ukuba nemvelo evulekile ngokuphelele, sebenzisa kangcono iGitLab. Ngakolunye uhlangothi, uma ukhetha izinsiza eziningi futhi usebenzisa insiza yewebhu ngobukhona obengeziwe, bese uya eGitHub. Kungabandakanya umuntu wesithathu futhi bengizokutshela ukuthi uma ufuna ukusebenza nezinsizakalo ze-Atlassian kufanele ubheke ohlangothini lwe- bitbucket...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukuhlela » IGitHub vs GitLab: izinzuzo nokungahambi kahle kwalezi zingxenyekazi
U-Eugenio Miró kusho
Kuyangikhathaza kakhulu lapho kukhona ukuthambekela, futhi ukuba ngumsebenzisi wabo bobabili ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi wazi ukuthi iGitHub imahhala kuzo zombili izinqolobane zomphakathi nezangasese ngendlela engenamkhawulo.
Uma kunomkhawulo wosayizi, kepha empeleni ngensizakalo yamahhala ngikuthola kulula kakhulu kuneGitLab neBitbucket, engiyisebenzisayo nayo, ikakhulukazi inkinga yomphakathi, njengokungathi ivelele kunothi.
Ngokuvamile, inothi lihle kakhulu, kodwa ngiyazisola ngokuthi ukuthambekela kuyabonakala kuleli cala.
Phendula u-Eugenio Miró
I-AOS-P3: Ukuhlola i-Apple Open Source enkulu futhi ekhulayo - Ingxenye 3